Iingcebiso ezi-5 zokujongana namajelo eendaba njengoMthombo weNgcali | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Agasti 21, 2020 NgoLwesihlanu, Agasti 21, 2020 URon Gold
Umabonwakude kunye nokuprinta iintatheli ziingcali zodliwanondlebe kuzo zonke iintlobo zezihloko, ukusuka kwindlela yokuyila iofisi yekhaya ukuya kwezona ndlela zilungileyo zokongela umhlalaphantsi. Njengengcali kwicandelo lakho, ungabizwa ukuba uthathe inxaxheba kwicandelo losasazo okanye uprinte inqaku, elinokuba yindlela elungileyo yokwakha uphawu lwakho kunye nokwabelana ngomyalezo olungileyo malunga nenkampani yakho. Nazi iingcebiso ezintlanu zokuqinisekisa amava emithombo yeendaba elungileyo, enemveliso.
Xa Imithombo yeendaba ibiza, Phendula
Ukuba unethuba lodliwanondlebe kwiTV okanye ekuprintweni, yeka nantoni na oyenzayo. Njengomphathi, enye yeendima zakho ezibalulekileyo kukuqinisekisa ukuba inkampani yakho ifumana iphephandaba. Amalungu eendaba anokufowunela ngokulula omnye wabakhuphisana nabo, ke xa bekhetha ukukufowunela, bamba ithuba lokufumana igama lenkampani yakho kunye nomyalezo phaya.
Phendula ngexesha elifanelekileyo kwaye uzenze ufumaneke. Ukuba uyasebenzisana kwaye uyafikeleleka, inokuba sisiqalo sobudlelwane obude kunye nobuluncedo. Nika intatheli inombolo yakho yefowuni umxelele ukuba anganxibelelana nawe nanini na.
Cwangcisa into ofuna ukuyithetha kunye nendlela oza kuyithetha ngayo
Yiba nesicwangciso esipheleleyo sento ofuna ukuyifumana kudliwanondlebe. Intatheli ine-ajenda yayo: Ufuna ukubonelela abaphulaphuli bakhe ngenqaku elinomdla nelifundisayo. Kodwa unayo i-ajenda: ukunxibelelana nomyalezo olungileyo malunga nenkampani yakho. Ufuna ukuphendula imibuzo yentatheli, kodwa wazi indlela yokwenza ipivot.
Yithi intatheli yenza icandelo leTV kwimpilo yenja, ngamacebo aluncedo ngendlela abantu abanokuqinisekisa ngayo ukuba inja yabo isempilweni. Unokwenza udliwanondlebe nomfuyi wenja ukuze afumane iingcebiso. Umfuyi unokwabelana ngobuchule bakhe bokugcina izinja zisempilweni, ngelixa ethetha nokuba ube ngumfuyi ophumeleleyo iminyaka engama-25 kwaye ubeka uthando kunye nomzamo omkhulu ekuveliseni iinjana ezisempilweni, ezonwabileyo.
Yazi into oyaziyo, kunye nento ongayaziyo
Njenge-CEO yenkampani yakho, kuya kufuneka wenze uninzi lodliwanondlebe lweendaba. Uyawuqonda ngcono umfanekiso omkhulu wenkampani yakho kunaye nabani na, kwaye ujonge ubuso bombutho. Kodwa ngamanye amaxesha kukho abantu ngaphakathi kombutho wakho abanolwazi ngakumbi ngakumbi ngesihloko esithile. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ngelixa unokuba yingcali kwizinto ezininzi, awuyongcali kuyo yonke into.
Yithi inkampani yakho ithengise izongezo zesondlo kunye neevithamini. Ungazi ukuba zeziphi iimveliso zakho zezona zibhengezwe kakhulu kunye nabathengisi abakhulu, kodwa ngekhe uyazi isayensi ngqo emva kwayo yonke imveliso. Ke ukuba udliwanondlebe lumalunga nokuba isongezelelo esithile sisebenza njani, kungangcono ucofe ingcali yesayensi esebenza kulomgca wemveliso ukwenza udliwanondlebe. Chonga abantu abahlukeneyo abaneendawo ezahlukeneyo zobungcali kumbutho wakho, kwaye ubalungiselele kwangaphambili ukuba bathethe nemithombo yeendaba.
Kwinqaku elinxulumene nalo, ukuba intatheli ikubuza umbuzo ongayazi impendulo kuwo, unokucinga ukuba yeyona ntloni. Kodwa ungakhathazeki: Akukho nto iphosakeleyo ngokuthetha nentatheli:
Lowo ngumbuzo olungileyo, kwaye ndifuna ukwenza uphando ukuze ndifumane impendulo elungileyo. Ngaba ndingabuyela kuwe kamva namhlanje?
Kwaye musa ukuthelekelela kwimpendulo. Kwaye xa ubuyela kwintatheli, qiniseka ukubeka impendulo ngamazwi akho. Musa, umzekelo, ukusika nokuncamathisela amagama avela kwinqaku lephephandaba okanye kwiwebhusayithi kwaye uyithumele kwintatheli. Nawuphi na umbuzo obuziweyo kufuneka uphendulwe ngolwazi lwakho-nokuba kuya kufuneka wenze uphando ukuze ufumane olo lwazi.
Soloko uphatha iintatheli ngentlonipho. Yazi igama lentatheli, nokuba kukwiTV, umnxeba okanye udliwanondlebe lwewebhu.
Yiba nembeko kwaye uqiniseke. Yitsho izinto ezinje ngo "Umbuzo olungileyo" kwaye "Enkosi ngokundifaka."
Nokuba ucinga ukuba umbuzo awunangqondo, sukuyenza intatheli izive isisiyatha. Sukuthi, "Kutheni undibuze loo nto?" Awazi ukuba intatheli iya kuba nakho njani ukuthatha iimpendulo zakho kwaye idibanise ulwazi ebalini.
Sukuphikisana nentatheli, ngakumbi xa usesemoyeni. Gcina ukhumbula ukuba ukuba awunanto kwaye ulirhabaxa, ibali liya kuza netoni engeyiyo.
Kwaye ukuba uthetha ngentatheli ezantsi, uya kujonga kwenye indawo ngexesha elizayo xa efuna ingcali kwicandelo lakho.
Ukuba udliwanondlebe kwikhamera, cinga kwimbonakalo yakho. Madoda, ukuba unxibe isuti, cofa ibhatyi; ijongeka ingcali ngakumbi. Endaweni yesuti, ihempe yegalufa enophawu lwenkampani yakho yeyona ndlela ilungileyo. Uncumo xa uthetha kwaye musa slouch.
Ewe kunjalo, uninzi lodliwanondlebe namhlanje luyenziwa ngaphezulu kwe-Zoom okanye itekhnoloji efanayo. Qiniseka ukuba unxiba ngokufanelekileyo (ubuncinci ukusuka esinqeni ukuya phezulu), kwaye ujonge ukukhanya kunye nemvelaphi yakho. Endaweni yomonakalo ongalungelelaniswanga, uyolo olucocekileyo, oluhle lwangasemva- mhlawumbi kunye nelogo yenkampani yakho evezwe ngokuqaqambileyo- iya kunceda ukubonisa wena kunye nenkampani yakho ngokukhanya okungcono.
Ukuba unemibuzo malunga nokujongana nemithombo yeendaba, sazise. Njengentengiso yenkonzo epheleleyo kunye nobudlelwane boluntu, Imisebenzi yokuthengisa ibonelela ngoqeqesho kwimidiya kunye nezinye iinkonzo.
tags: umthombo wengcaliudliwanondlebeudliwanondlebe kwi-IntanethiCinezelaudliwanondlebe nobudlelwane noluntuyenza nkulu
URon Gold ngumongameli kunye ne-CEO yeNtengiso yezeMisebenzi, unxibelelwano olugcweleyo kwinkonzo yoluntu kunye nefemu yokuthengisa esekwe eMpuma Setauket, NY Ukwangumsunguli kunye nomnxibelelanisi weNkqubo yeZwi elingenzi nzuzo kwiRadio ye-103.9 FM LI News.